Lego ninjago ကြယ်စစ်ပွဲများ Ace ချေမှုန်းရေး
ထိုနဂါးငွေ့တန်းအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့ပြေးကားအဘယ်သူနည်း ဟန်တစ်ကိုယ်တော်? ဒါမှမဟုတ် Aayla Secura နှင့်အတူ Embo? Slave, ငါ Boba Fett နှင့်အတူစတင်များနှင့်ဧကရာဇ်လျှောခ Palpatine နှင့်အတူပြီး - - ကွဲပြားမှုများအများဆုံးပြင်းထန်သောသူရဲကောင်းများနှင့်အတူတိုက်ပွဲထဲမှာအကျော်ကြားဆုံးလေယာဉ်ကိုထိန်းချုပ်
ninjago: Lego ဓာတ်ဆီဆိုင်
စမ်းသပ်မှုသွားမယ့်လုံလောက်တဲ့ဓာတ်ဆီနှင့်အတူ Lego ကားများအသီးအသီးကိုတက်ဖြည့်ပါ။ သငျသညျအသီးအသီးအဆင့်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပွုနိုငျသနညျး
ninjago ဒဏ္ဍာရီတိုက်ပွဲများ 2
ဒီ Ninjago ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ kai အများအပြားရန်သူများကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ဘယ်မှာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သစ်တောတွေထဲမှာပျောက်ဆုံး, kai ရဲ့မစ်ရှင်အထူးစွမ်းရည်နဲ့သူ့ရဲ့ရန်သူများကိုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Kai ဂိမ်းထဲမှာအားလုံးအဆင့်ဆင့်အပြီးသတ်ကူညီပါ။
Lego ninjago စွန့်စားမှု
Lego မှ Ninjago စွန့်စားမှု။ Lego ဂိမ်း Play! ပျော်စရာရှိသည်!
အသစ်မြေများကိုအောင်နိုင်မှလမ်းအပေါ် Ninjago, လမ်းတစ်လျှောက်တွင်အများအပြားအတားအဆီးခြေလှမ်းများငရဲ, သငျသညျသူ့ကိုမကောင်းဆိုးဝါးအနိုင်ရကူညီရှိပါတယ်။
စွမ်းအင်ကိုလှံနှငျ့သငျ့ရဲ့ Ninja ကိုတပ်ဆင်နှင့်သူ၏စွန့်စားခရီးစဉ်ကိုစတင်! အားလုံးသူ့အပြိုင်ဘက်ကိုဆင်းရိုက်နဲ့စက်ရုပ်၏ကမ်ဘာ့အောင်နိုင်ရန်သင့်နင်ဂျာမှာထား၏! အမြဲတမ်း, ရှိသည်ပျော်စရာအဖြစ်!
ဒီ Kai ရဲ့အပေါငျးတို့သမိကျောင်းကိုသတ်နှင့်အာဏာပြန်ပေးဖို့ဒင်္ဂါးပြားကိုသုံးပါမမေ့မလြော့ပါစို့, Kai ကာကွယ်ဖို့ Citadel ၏နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပါသည်။ ဒီဂိမ်းစီးရီးဂိမ်း Lego မှ Ninjago တဦး။
Ninjago တောင်တက်ခြင်း။ Ninja တတ်နိုင်သမျှအများအပြားရမှတ်ခုန်နှင့်စုဆောင်းသွားကိုကူညီအသုံးပြုမှု space bar ကို
ninjago Lego ခုန်ဂိမ်း
Ninjago ခုန်အားကစားပြိုင်ပွဲ။ ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Ninjago ကမ္ဘာ၏အဆုံးကိုသွားကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းမှပလက်ဖောင်းကနေခုန်အားမိမိဒုံးပျံကိုထိန်းချုပ်ဖို့
သငျသညျအစဉျအသင်စိတ်ကူးနဂါး Ball ကိုဇာတ်လမ်းထဲမှာဇာတ်ကောင်ကိုထိန်းချုပ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အာဏာပိုင်များရှိသည်ထင်ရှိသည်။ ဒါဟာသင်ဒီဂိမ်းနဲ့လုပ်ဖို့အဘို့ဤမျှလွယ်ကူသည်။ ဘောလုံးကိုရိုက်ကူး, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်နှင့်သင်လုပ်နိုင်နှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရ
သင့်ရဲ့မျှော်စင်ကိုဆင်းယူရန်ကြိုးစားသောရန်သူများကိုနှိမ့်ချသေနတ်။ ကဖကျြဆီးခံရမယ့်တစ်ချိန်ကသတိထားပါ, ကျော်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကခရစ္စမတ်ဘတ်စကက်ဘောကစားပွဲ့အခြေ။ ဒါဟာရိုးရှင်းပြီးစွဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို Play မှ: အာဏာကို (မြန်နှုန်း) နှင့်ထောင့် (ညှနျကွားခ) ၏ setting ကိုစတင်ရန်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ တစ်ဦးညှနျကွားခ mouse ကိုဖိဆွဲပါ, မြှားသင်တို့သည်တန်ခိုးကိုတစ်ဦး၏ပမာဏကိုပြပါလိမ့်မယ်
scooby Doo ထောင်ချောက်
Scooby Doo သင့်ရဲ့လမ်းအပေါ်သရဲတစ္ဆေများနှင့် ghouls ထွက်သည်ကိုကြည့်ခြင်း, အဆင့်ဆင့်၏အသီးအသီး၏အဆုံးကိုရောက်ရှိကူညီပါ။
ဒီနေ့ဒိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်တိရစ္ဆာန်ရုံသွား၏, သူမ၏အလုပ်ကလေးမိကျောင်းကိုဂရုစိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကလေးမိကျောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့သင်လိုအပ်လိမ့်မည်, သင်ကသေးငယ်တဲ့ဂိမ်းကိုဖြည့်ဖို့မှန်ကန်သော icon ကိုရှေးခယျြဖို့လိုပါတယ်။ သငျသညျကို ယူ. , ကလေးမိကျောင်းစာကျွေးပါလိမ့်မယ်
3d la စူပါ
3D LA ကစူပါသင်သည်ထိုအထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သောအကောင်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်: ကသငျသညျမောင်းထုတ်ရန်အဘို့အတကယ်ကိုအစာရှောင်ခြင်းကားတွေရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အကြီးအရှုခင်း, ကောင်းတဲ့ဂီတနှင့်တစ်ဦးကြောက်မက်ဘွယ်ဂိမ်းကစားရှိပါတယ်။ ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်းအများအပြားဏရိုက်မရှိဘဲအဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီးမောင်းနှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်